Nzvimbo dzegumi dzeBhaibheri dzegumi Nezvekuedzwa kjv | MINYENGETERO MARI
musha Mavhesi eBhaibheri Nhaurwa dzegumi dzeMavhesi nezveKuyedzwa kjv
1 VAKorinde 10:13:
MuKristu wese anotambisa zvakaoma kukunda miedzo, chero bedzi iwe neni tichifema, tichagara tichiedzwa. Icho hachisi chivi kuyedzwa nadhiyabhori, kana kuti unzwe kuyedzwa, chinongova chivi kana tikapa mukuedzwa. Zvisinei tinofanira kuziva izvi kuti Mwari haatipengeri nekuda kwezvivi zvedu, akatida kunyangwe sevatadzi vaRoma 5: 8, asi chokwadi ndechekuti Anoda kuti tikunde miedzo, Mwari anovenga zvivi, asi Anoda mutadzi . Anhasi epamusoro gumi ebhaibheri mavhesi nezve muyedzo kjv ichatitungamira isu sekuona kwedu kufunga kwaMwari maererano nenyaya.
Paunenge uchidzidza aya mavhesi ebhaibheri ndapota ziva izvi, Mwari haatiedze, Haayedze nezvakaipa uye haakwanise kuyedzwa nezvakaipa. Jakobho 1:13. Isu tinoedzwa nezvido zvedu zvoudyire, gamuchirai nyasha nhasi kukunda miedzo. Verenga uye uropafadzwe.
1. 1 Vakorinde 10: 13:
2. Jakobho 1:12:
3. Jakobho 1:13:
13 Ngakurege kuva nemunhu anoti kana achiidzwa, ndakaidzwa naMwari, nekuti Mwari haangaidzwa nezvakaipa, kana kuidza munhu.
28 Ko munhu ungaenda pamazimbe anopisa, tsoka dzake dzikasatsva?
5. Mako 7: 20-23:
20 Zvino wakati: Icho chinobuda mumunhu, ndicho chinosvibisa munhu. 21 Nekuti kubva mukati, mumoyo mevanhu, munobuda zvakaipa zvakaipa, upombwe, ufeve, umhondi, 22 umbavha, kuchochora, uipi, kunyengera, hupombwe, ziso rakaipa, kunyomba, kudada, upenzi: 23 Zvinhu izvi zvese zvakaipa zvinobva mukati, uye osvibisa murume.
6. Mateo 26:41:
7. Mapisarema 38:9:
9 Ishe, zvose zvandaishuva zviri pamberi penyu; Kugomera kwangu hakuna kuvanzika kwauri.
8. Jakobho 1:3:
9. Ruka 4:2:
2 achiidzwa nadhiabhorosi mazuva makumi mana. He those And in::::: And And And And And And And And And And And And And And And And And And And And And
10. Mateo 6:13:
Previous nyayaMavhesi makumi maviri eVhesi Zvese pamusoro Penyasha
inotevera20 mfm munamato mapoinzi vhiza
Kunamata Kunamata Kuparadza Zvirongwa zvemuvengi
40 Munamato wekubudirira Muhupenyu
Minamato Yekushandira Vamwe Muhope